ARIN YAAB LEH: HABEEN LABA MAGAC LEH - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
ARIN YAAB LEH: HABEEN LABA MAGAC LEH
August 10, 2018 at 22:43 ARIN YAAB LEH: HABEEN LABA MAGAC LEH2018-08-10T22:43:18+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
​Waxaan ka maqalnaa Idaacadaha VOA iyo BBC “Waa habeen Arbaca oo Khamiisi soo geleyso” !! Waa la yaab siduu hal habeen laba magac ku yeeshay? Halka habeen waa 12 saac in 6da hore Arbaca tahay 6da dambe Khamiis noqoto waa waxaan macquul ahayn waayoo maalinta laba magac ma yeelato. Siduu habeenku ku yeeshay? Xisaabtaas waa xisaab Masiixi ah waxay aaminsan yihiin in Nabi Ciisa SCW uu dhahsy habeen bar oo saacadda ku xigta ay noqotary 1:00. Laaakin sidaan ku arkayno Suurat Maryam (Aayadaha 16-33) Waxaan halkan ku soo koobeynaa Aayadahaas. Waxay inoo sheegeyaan in Maryam oo dhanka bari uga baxday Qudus si ay uga qabaysato caadada oo maryo ay ka sameysatay daah ayaa Jibriil oo Banid Aadam la moodo ayaa u yimid waxay tiri.
​Halkaas waxaa inooga cad in xilliga ay ula timid ineysan habeen bar ahayn waayo berigaa dadku saacaddaas sooma jeedin. Marka xisaabtaa habeenkaas labada magac leh wax jira ma aha.
​Annaga Nabigeennu SCW wuxuu inoo sheagay Xadiithki uu weriyay Abuu Hureyrah
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
Axadiitta naga reebeysa inaan isu ekeysiinno ama ku dayanno Yuhuudda iyo Nasaarada waa badan tahay waxaan ka soo qaadaneynaa xadiith kan
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود
​Ugu dambeynti waxaan ku talin lahaa inaan isku dayno inaan baranno bilaha diiinteenna iyo cibaadadeenna ay ku dhisan tahay ee Soonka, Xajka, Ciidaha, Cuddada dumarka lagu xisaabiyo inaan fiiro gaar ah u yeelanno lana soconno tirade bisha si aan u fulinno tilmaamaha Quraanku inagu boorrinaayo inaan la soconno. Warku intaan wa ka badan yahay laakin malah marar kale ayaan wax sheegi donnaa insha ALLAH. Maqaalkad dambe waxaan ku faah faahin doonnaa bartamaha caalamka meesha ay tahay si looga qaato xisaabta saacadda iyo Ingiriisku siduu ku keenay xisaabtan loo yaqaan GMT isagoo u dan leh inuu meesha ka saaro xisaabta ku dhisan bartamaha caalamka oo ah Makka.
Qore: Sh.Xasan Faqay Moxamad
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
« MAQAAL XIISO LEH: JABUUTI MAXAY KA BARAN KARTAA SIYAASADA MAANTA EE GEESKA AFRICA
Manchester united oo guul ku daah Furtay horyaalka Premier League markii ay Wajahday Liecester City+SAWIRRO »